RASMI: Baarlamanka dhexe oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyey RW Rooble | Hadalsame Media
Home Wararka RASMI: Baarlamanka dhexe oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyey RW Rooble
(Muqdisho) 23 Sebt 2020 – Xildhibaanada Baarlamanka Dhexe ee Somalia ayaa goor dhowayd si aqlabiyad leh ku meel mariyey Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Somalia, RW Maxamed Xuseen Rooble.
RW Rooble oo xilka uu MW Farmaajo u magacaabay 17-kii bishan Sebtembar ayaa lagu ansixiyey madasha oo ay soo xaadireen 215 oo mudane.
Waxaa kahor inta aan la ansixinin goobta ka hadlay Guddoonka Baarlamanka Md Mursal iyo MW DF Md Farmaajo oo khudbado kooban oo ay ka jeediyeen Villa Hargaysa ku codsaday in la meel mariyo RW Rooble, iyadoo uu gaar ahaan MW sheegay inuu RW ku tuhmayo kuna xushay waayo aragnimo, aqoon iyo wadaniyaddiisa oo sarreysa, sida uu yiri.
RW laftiisa oo Baarlamanka ka hor hadlay ayaa wuxuu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono amniga, doorashada, dhaqaalaha, dowlad wanaagga, cadaaladda, dib u eegista dastuurka, dhab u heshiisiinta, iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah, isla markaana uu soo dhisayo xukuumad tayo leh.
Waxaa kaddib loo qaaday codka kalsoonida oo ay wada siiyeen 215-kii Xildhibaan ee madasha soo xaadiray oo dhan, iyadoo uu markiiba xilka culus u dhaariyey Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, Baashe Yuusuf Axmed oo goobta joogey.
Previous articleTalyaaniga oo ay ka socoto afti ku fiicnaan lahayd dalka Somalia (Maxay ku saabsan tahay?)
Next article”Halla cabo!” – Imaaraadka oo si uu u qanciyo dalxiiska Israel meesha ka saaray sharci xakamaynayey aalkolada